Madaxweyne Farmaajo oo magacii ka baddelay magaalada Dhuusamareeb | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweyne Farmaajo oo magacii ka baddelay magaalada Dhuusamareeb
Madaxweyne Farmaajo oo magacii ka baddelay magaalada Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Madaxweynaha JF Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta ka qeybgalay munaasad lagu xirayay wajiga 3-aad ee Shirka Dhuusamareeb ayaa sheegay in uu Magaca ka bedelay Magaalada Dhuusamareeb.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay, in marka la’eego dhawaqa magaca magaalada Dhuusamareeb uu ka bedalanyahay magaalooyinka kale ee dalka.
“Waxaa dhowr jeer la ii keenay soo jeedin la iyiri magaaladaan waa Taariikhi magaceeduna waa magac ka duwan magacyada magaalooyinka Soomaalida marka si aan u casriyeyno magaca magaalada waxaa madaxweynaha iyo Masuuliyiin badan iga codsadeen inaan ugu dhawaaqo magac kale oo la yiraahdo SAMAREEB” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Dad farabadan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go’aankaan uu qaatay Madaxweynaha JF Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee magacii Magaalada Dhuusamareeb u bedelay (SAMAREEB)
Ilaa iyo hadda lama oga sida uu ku hirgeli doono magacaan cusub, maadaama muddo fog magaaladaas loogu yeeri jiray Dhuusamareeb.
Dhuusamareeb oo magacii laga baddelay